मेलम्ची बा-ढीमा हेलम्बुदेखि २२ किलोमिटर बगेको गर्भिणी भैँसीको सकुशल उद्धार! सम्मान स्वरुप सेयर गर्नुहोला। - खबरदार न्युज
June 22, 2021 June 22, 2021 AdministerLeaveaComment on मेलम्ची बा-ढीमा हेलम्बुदेखि २२ किलोमिटर बगेको गर्भिणी भैँसीको सकुशल उद्धार! सम्मान स्वरुप सेयर गर्नुहोला।
गते दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको चनौटेमा मेलम्ची बाढीमा बगिरहेको एउटा भैँसी देखियो । तर खोलाको बा’ढीमा बग्दै गरेको भैँसीलाई उ’द्धार गर्न कोही जान सक्ने अवस्था थिएन ।
स्थानीय रवि खड्काले खिचेको भिडियोमा स्थानीयहरुको आवाज सुनिन्छ, ‘भैँसी जिउँ’दै रहेछ । अब त्यहाँबाट पनि लैजान्छ । र’गत निस्किएको रहेछ । बरु त्यसरी बस्नुभन्दा जाओस् । स्व’र्गमा बास होस् ।’ हेर्दा हेर्दै ढुङ्गाहरू सँगै भैँसीलाई पनि बा’ढीले गु’ल्टाएर बगाउँछ ।
सिन्धुपाल्चोकको चनौंटे क्षेत्रमा भिडियोमा कैद भएको भैँसी हे’लम्बु गाउँपालिका वडा नं. २ किउल भन्ने ठाउँबाट ब’गेको थियो । किउलबाट चनौटे, ग्याल्थुम, तालामाराङ्, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, हुँदै काभ्रेको सीमा छेउ फड्केश्वरमा पुगेको थियो ।
इन्द्रवती नदीले बगा’उँदै ल्याएको भैंंसी सोहीदिन साँझतिर १६ वर्षका रोमन कार्की र १८ वर्षका धनबहादुर तामाङले काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाछेउ उ’द्धार गरे ।
असार १ गते मेलम्ची खोलामा रातभरी बा’ढी आयो । हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. ६ किउल, ओडारेका तारा शिवभक्तिको घर गोठ बाढीको भं’गालोमा प¥यो । दिउँसो स्थानीयले भैँसीको उ’द्धार गर्न खोजे तर सकेनन् । असार २ गते दिउँसो ३ बजेतिर बाढीले २ वटा भैँसी ब’गायो ।
मेलम्ची नगरपालिकाको पशु शाखामा कार्यरत भेटनरी प्राविधिक चेतप्रसाद घोरासैनीले पनि मेलम्चीमा भैँसी जि’उदै बगिरहेको देखे । उनी मेलम्ची भन्दा माथिको गाउँमा भैँसी बि’रामी भएकोले उप’चारका लागि गएका थिए । उनी आफ्नो घर फड्केश्वर आइपुग्दा फड्केश्वरमा रोमन कार्की र धनबहादुर तामाङले उद्धार गरिसकेका थिए
भैँसीको उद्धार गर्नेहरुले पशु प्राविधिक घोरासैनीलाई फोन गरेर भैँसीको र’गत बगिरहेको छ, खुट्टा सुन्निएको छ, घा’उ नै घा’उ छ भन्दै उ’पचा’रका लागि बोलाए ।
घोरासैनीले भैँसीको घा’उ सफा गरेर ए’न्टि’बायो’टिक औ’षधी दिए । खोलाबाट झन्डै १० मिनेट हिँडाएर एउटो गोठमा भैँसी राखियो ।
घोरासैनीले भने, ‘४ दिनमा भैँसीको निकै सुधार भएको छ । घाँस पानी खोले मज्जाले खान्छ । हेलम्बु गाँउपालिकामा बस्ने साथीसँग कुरा गरे । भैँसी धनीसँग सम्पर्क भयो । अहिले त बि’रा’मी जस्तै देखिएको छैन । भोलिसम्म दिँदा ठीक हुन्छ कि ।’
भैँसीको मुखको तल्लो भागमा ठूलो घा’उ लागेको छ । शरीरका विभिन्न भागमा चो’ट लागेको छ । पहिलो दिन भैँसीको ज्व’रो १ सय ४ पुगेपनि अहिले घट्दै गएको घोरासैनीले बताए ।
उनले भने–‘मैले साउनमा ब्याउने होला भन्ने सोचेको थिँए यही असार ९ गते भैँसीको दिन पुग्ने रहेछ । भैँसीको स्वास्थ्यस्थित राम्रो छ । मैले ए’न्टि’बा’योटि’कहरु चलाएको छु । मेरो बिचारमा भैँसी राम्रोसँग ब्याउँछ ।’
भैँसी भेट्न ५ घण्टा पैदल यात्रा
पशु प्राविधिक चेतप्रसाद घोरासैनीका अनुसार भैँसी भेटिएको ठाउँबाट बगा’एको ठाउँ झन्डै २२ किलोमिटर टाढा छ । उनले हेलम्बुमा रहेका साथीहरुको सम्पर्कबाट भैँसी धनीसम्म सम्पर्क गरे । फोनमा भैँसी धनीले सिङ लामा लामा भएको र भैँसी ब्याउने बेलाको छ भनेपछि घोरासैनीले उनीहरुलाई बोलाए ।
उनले भने–‘भैँसी ब्याउने छ । दाम्लो नथीसहित छ हैन सर भनेर भन्नुभयो । उहाँहरु यहाँ आएपछि भैँसीले पनि चिनिहाल्यो । जो कोही मान्छेले मेरो भैँसी हो भनेर आउने हो कि भन्ने डर थियो तर भैँसीले नै उहाँलाई चिनेपछि ड’र भएन ।’
अरु मान्छेसँग ड’रा’इरहेको भैँसी आफ्नो धनीलाई भेटेपछि शान्त बनेको थियो । पशु प्राविधिक घोरासैनीले ४५ सय रुपैयाँ हा’राहारीको व्यक्तिगत औ’षधी उप’चा’रमा प्रयोग भएको र आफूले निःशुल्क उपचार गरिदिएको रातोपाटीलाई बताए ।
कसरी बगा’एको थियो घर गोठ ?
हे’लम्बु गाउँपालिका वडा नं. ६ किउल स्थित हे’लम्बु गाउँपालिका कार्यालय, बाढीले भ’त्काएको प्र’हरी कार्यालय र तारा शिवभक्तिको घर ठीक वारीपारी थियो । उनको घर र गोठ बा’ढीले बगाएर अहिले बगर भएको छ ।
रातोपाटीसँग उनले भने–‘अहिले घर खेती गोठ केही पनि छैन, सबै बाढीले बगायो । अलिकति पाखोबारी छ । अहिले पाखोबारीमा बसिरहेका छौँ । दुईटा भैँसी पालेको थिएँ । एउटा माउ र अर्को थोरे थियो । दुईटै भैँसी बगाएको थियो, अर्को भैँसी कहाँ के भयो केही थाहा छैन ।’
उनको घर गोठ खोलाको किनारभन्दा ५० मिटर माथि नै थियो । खेतीयोग्य जमिनसँगै घरगोठ थियो ।
उनले भने, ‘असार १ गते घर गोठ भएको ठाउँमा लेदो बा’ढी पसेर जान नसक्ने स्थिति बन्यो । असार २ गते बिहानैदेखि हामी भैँसी भएको ठाउँमा जान प्रयास गरे पनि सक्ने स्थिति बनेन । भैँसीलाई हामीले हेर्ने र भैँसीले हामीलाई हेर्ने अवस्था मात्र भयो । दिउँसो साढे २ बजेतिर ह्वा’त्त बा’ढी आयो र भैँसीलाई लिएर गयो । हामीले आँखाले देख्नेजतिसम्म हेरिरह्यौँ । तल्लो भागमा बस्ने मान्छेहरुले पनि भैँसी खोलाले लगिरहेको छ, म’रिस’केको छैन् भनिरहेका थिए । त्यति ठूलो बा’ढीमा परेको भैँसी हामीले त यसरी बाँच्ला भनेर कल्पना नै गरेका थिएनौँ । माया मा’रि’सकेका थियौँ
भैँसी भेटियो भन्ने सुनेपछि उनलाई विश्वास नै लागेन । उनले फोटो पठाइदिन भने । उनले भने–‘हाम्रो जिवन गुजारा गर्ने माध्यम नै त्यै भैँसी थियो । बा’ढीले हाम्रो सबै सम्पत्ति लिएर गयो । बुवाले र मैले घाँस का’टेर मिहिनेत गरेर दुईटा भैँसी पालेका थियौँ । त्यै भैँसीका लागि दुः ख गरेर बसेका थियौँ ।’
आफ्नो जिवन गुजाराको साहारा रहेको भैँसी भेटिँदा उनी भा’वुक बने । उनले भने–‘यति ठूलो बाढीमा भैँसी बाँ’च्ला भन्ने हामीलाई विश्वास नै थिएन । हामीले माया मा’रिस’केको भैँसी भेटिएको भन्दा विश्वास लागेन । अरुको पनि हुन सक्छ । यति टाढाबाट हिँडेर किन दु ख पाउनु फोटो हेरेपछि थाहा हुन्छ भनेपछि फोटो पठाइदिनुभयो । फोटो देखेपछि हाम्रै भैँसी रहेछ । शनिवार उहाँदेखि ५ घण्टा हिँडेर बाउ छोरा भैँसी भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ ।’
हेल’म्बुदेखि बा’ढीमा बगाएको ग’भिर्णी भैँसी काभ्रेको सिमाछेउ पुग्दापनि जिवित भेटिँदा स्थानीयले आश्चर्य मानेका छन् । भैँसी त भेटियो तर घर गोठ गुमा’एका उनलाई अर्को गोठ बनाउनुपर्नेछ ।
उनले भने–‘भू’क’म्पछि पाखोबारीमा कमाइ लगाउन छोडेका थियौँ । अहिले हामी त्यही बारीमा बसेका छौँ । अब त्यही बारीमा दुई चार पाता जस्ता ओढाएर गोठ बनाएर राख्छौँ ।’
तर, भैँसी भेटाएर खुसी भएपनि गाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने अर्को चि’न्ता थपियो । घा’इ’ते भैँसीलाई ५ घण्टा हिँडाएर लैजान पनि गा’ह्रो । नयाँ ठाउँमा पाल्न पनि समस्या ।
उनले भने, ‘यही असार ९ गते भैँसीको दिन पुग्दैछ । भैँसी यहीँ ब्यायो भने दश पन्ध्र दिन यतै बस्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ नयाँ नौलो ठाउँमा हामीलाई बस्न पनि गा’ह्रो छ । घाँस कताबाट ल्याउनु, खोले कसरी खुवाउनु । स्याहार सुसार गर्न सकिँदैन । घरमा लान पाए त छिमेकीहरूसँग सहयोग मागेर केही गर्न सकिन्थ्यो । सकेसम्म आजभोलि नै लैजान पाए हुन्थ्यो ।’
त्यसमा पनि बा’ढीबाट उद्धार गर्नेहरुले चालिस हजार रुपैयाँ मागेपछि उनी केहीबेर बिखलबन्दमा परे । तर पछि पशु प्राविधिक चेतप्रसाद घोरासैनी र स्थानीयको आग्रहपछि भैँसी उद्धार गर्नेहरु पनि पैसा नलिन राजी भए । फड्केश्वरका स्थानीयहरुले गाडी भाडाका लागि ५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन शिवभक्तिलाई दिए । पशु प्राविधिक घोरासैनीले रातोपाटीसँग फोनमा भने–‘हामीले उहाँहरुलाई आर्थिक सहयोग सहित गाडीमा चढाएर पठाएका छौँ । अहिले मेलम्ची पुग्न लाग्नुभयो होला ।’
गाडीमा भैँसी चढाइदिएर फड्केश्वरका स्थानीयले तारा शिवभक्तिका बाबुछोरालाई बिदा गरेका छन् । मेलम्चीसम्म गाडीमा लगेर त्यहाँबाट भैँसीलाई बिस्तारै गाउँ पुयाउने उनीहरुको योजना छ।
स्थानीय रवि खड्काले खिचेको भिडियोमा स्थानीयहरुको आवाज सुनिन्छ, ‘भैँसी जिउँदै रहेछ । अब त्यहाँबाट पनि लैजान्छ । र’गत निस्किएको रहेछ । बरु त्यसरी बस्नुभन्दा जाओस् । स्व’र्गमा बास होस् ।’ हेर्दा हेर्दै ढुङ्गाहरू सँगै भैँसीलाई पनि बा’ढीले गु’ल्टाएर बगाउँछ ।
सिन्धुपाल्चोकको चनौंटे क्षेत्रमा भिडियोमा कैद भएको भैँसी हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. २ किउल भन्ने ठाउँबाट ब’गेको थियो । किउलबाट चनौटे, ग्याल्थुम, तालामाराङ्, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, हुँदै काभ्रेको सीमा छेउ फड्केश्वरमा पुगेको थियो ।
इन्द्रवती नदीले बगा’उँदै ल्याएको भँैसी सोहीदिन साँझतिर १६ वर्षका रोमन कार्की र १८ वर्षका धनबहादुर तामाङले काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाछेउ उद्धार गरे ।
पशु प्राविधिक चेतप्रसाद घोरासैनीका अनुसार भैँसी भेटिएको ठाउँबाट बगाएको ठाउँ झन्डै २२ किलोमिटर टाढा छ । उनले हेलम्बुमा रहेका साथीहरुको सम्पर्कबाट भैँसी धनीसम्म सम्पर्क गरे । फोनमा भैँसी धनीले सिङ लामा लामा भएको र भैँसी ब्याउने बेलाको छ भनेपछि घोरासैनीले उनीहरुलाई बोलाए ।
कसरी बगाएको थियो घर गोठ ?
स्थानीय रवि खड्काले खिचेको भिडियोमा स्थानीयहरुको आवाज सुनिन्छ, ‘भैँसी जिउँदै रहेछ । अब त्यहाँबाट पनि लैजान्छ । र’गत निस्किएको रहेछ । बरु त्यसरी बस्नुभन्दा जाओस् । स्व’र्गमा बास होस् ।’ हेर्दा हेर्दै ढुङ्गाहरू सँगै भैँसीलाई पनि बा’ढीले गुल्टाएर बगाउँछ ।
कहाँ बाट आउछ ज्ञानेन्द्र शाहीसंग यत्रो पैसा? ५० लाखको कार छोडेर करोडौँको हेलिकप्टर किन्दै! सेयर गर्नुहोला।
यी हुन् भीर चढेर मेलम्चीको बाढीबाट जोगिएका इन्जिनियर, दुखि हुँदै भन्छन्- ८ जना सहकर्मी आँखै अगाडि गुमाएँ, सेयर गर्नुहोला ।
खुशिको खबर: यस बर्षको एस.इ.ई. परीक्षा पनि मुल्यांकनकै आधारमा हुने।
कोरोनाको कारण मृ’त्यु भएकाहरुको ला’स जलाउने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका ६ शैनिकको मृ’त्युु। सक्दो सेयर गर्नुहोला।